(L) ကြီးထွားလာသည့်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနအဖွဲ့တွင်ကိုကင်းကဲ့သို့အဆီပါသောအစားအစာများ (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌ဆန်သော ဦး နှောက်
ရောဘတ် Langreth နှင့် Duane ဃစတန်းဖို့ဒ်အားဖြင့်
သကြားနှင့်မြင့်မားသော fructose ပြောင်းဖူးရည်နှင့်အတူဒူဖက်တီးအစားအစာများနှင့်မုန်နှင့်အချိုရည်စွဲလမ်းဖြစ်သက်သေပြနေတယ်ဆိုရင် anti-ဆေးလိပ်သောက်လှုပ်ရှားမှုမျိုးဆက်တစ်ဆက်လွန်ခဲ့သောဆေးရွက်ကြီးစက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်ကိုယူကတည်းက Big စားနပ်ရိက္ခာအများဆုံးရေးဆွဲထွက်စားသုံးသူဘေးကင်းလုံခြုံမှုစစ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရပေမည်။
ဦးဆောင်တက္ကသိုလ်များနှင့်အစိုးရဓါတ်ခွဲခန်းမှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနတစ်ဦးကကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းများ၌အစားအစာနှင့် sugary အချိုရည်ပက်စီ Inc ၏အကြိုက်ခြင်းဖြင့်ဖွဲ့သောအကြံပြုနှင့် Kraft Foods Inc ကို (KFT) ရိုးရှင်းစွာကျန်းမာရေးအန္တရာယ်မရှိကြပေ။ သူတို့ကကိုကင်း, နီကိုတင်းနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများမှစွဲလမ်းတူကြောင်းနည်းလမ်းတွေနဲ့ဦးနှောက်ကိုအပိုင်စီးနိုင်ပါတယ်။
"ဒီဒေတာကိုဒါကြောင့်လယ်ပြင်မြားမြားသနေသည်ကလကျခံဖို့ရှိပါတယ်" ဟု Nora Volkow သည်၏ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ် မူးယစ်ဆေးအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု အလွဲသုံးမှု။ "ကျနော်တို့ကဦးနှောက်ထဲမှာဦးနှောက်နှင့်အစားအစာအတွက်မူးယစ်ဆေးများအကြားကြီးမားတဲ့ထပ်ရှာတွေ့နေကြပါတယ်။ " အစာစွဲလမ်းစေခြင်းငှါ၎င်းအယူအဆကိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာသိပ္ပံပညာရှင်များ '' ရေဒါပေါ်မှာအနိုင်နိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုတော့လယ်ပြင်ကိုတက်အပူသည်။ Lab မှလေ့လာမှုများ sugary အချိုရည်နှင့်အဖက်တီးအစားအစာများတိရိစ္ဆာန်များအတွက်စွဲလမ်းအပြုအမူထုတ်လုပ်နိုင်သည်တွေ့ပြီ။ အဝလွန်လူများနှင့် compulsive စားချင်သောသူ၏ပဦးနှောက် Scan ဖတ်ကလည်းမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုခြင်းဖြင့်ကြုံတွေ့သူတို့အားအလားတူဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဆားကစ်အတွက်နှောင့်အယှက်ထုတ်ဖေါ်။
အစားအသောက်စွဲလမ်းအပေါ်နှစ်ဆယ်ရှစ်သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများနှင့်စာတမ်းများတစ်ဦး၏အဆိုအရယခုနှစ်ထုတ်ဝေခဲ့ကြ အမျိုးသားရေး ဆေးပညာဒေတာဘေ့စ၏စာကြည့်တိုက် ။ အထောက်အထားချဲ့ထွင်သည့်အတိုင်းစွဲလမ်း၏သိပ္ပံပညာ $ 1 ထရီလီယံအစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာစက်ရုံများမှတစ်ဂိမ်း changer ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
သကြားနှင့်မြင့်မားသော fructose ပြောင်းဖူးရည်နှင့်အတူဒူဖက်တီးအစားအစာများနှင့်မုန်နှင့်အချိုရည်စွဲလမ်းဖြစ်သက်သေပြနေတယ်ဆိုရင် anti-ဆေးလိပ်သောက်လှုပ်ရှားမှုမျိုးဆက်တစ်ဆက်လွန်ခဲ့သောဆေးရွက်ကြီးစက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်ကိုယူကတည်းကအစားအသောက်ကုမ္ပဏီများသည်အများဆုံးရေးဆွဲထွက်စားသုံးသူဘေးကင်းလုံခြုံမှုစစ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရပေမည်။
'' ပျော်စရာ-for-သင်က ''
Yale တက္ကသိုလ်၏စားနပ်ရိက္ခာပေါ်လစီနှင့်အဝလွန်ခြင်းဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အဝလွန်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောစည်းမျဉ်းကိုထောက်ခံသူ Kelly Brownell က“ ဒါကဥပဒေရေးရာရှုထောင့်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်။ စီးကရက်ကလူတွေကိုသတ်တာကြာပြီဆိုတာလူတွေသိခဲ့ကြပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာနီကိုတင်းနဲ့သူမရည်ရွယ်ချက်ကိုကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ခဲ့တာကိုသူတို့သိခဲ့ရတယ်။ ”
အစားအသောက်ကုမ္ပဏီအမှုဆောင်အရာရှိများနှင့် lobbyists ဘာမျှအဘယ်အရာကိုပက်စီအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်မှားကြောင်း, ဘာမျှမသက်သေပြခဲ့တန်ပြန်ရန်အမြန်များမှာ Indra Nooyi ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု "ပျော်စရာ-for- သင်" အစားအစာများ, ဖြည့်ညှင်း၌စားလျှင်။ တကယ်တော့ကုမ္ပဏီများသူတို့စားသုံးသူကျန်းမာသန်စွမ်းရေစာရွေးချယ်စရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်ကမ်းလှမ်းဆီသို့ကြီးတွေအပြင်းအထန်လုပ်ဆောင်အောင်နေဟုဆိုသည်။ Nooyi, တဦးတည်းအဘို့, သူမရောင်းအားကားမောင်းဘို့ဖြစ်၏အဖြစ်ကျန်းမာခရာပူဇော်သက္ကာကိုပက်စီရဲ့တိုးတက်မှုကိုအာရုံစိုက်တောင်းဆိုများအတွက်အဖြစ်လူသိများသည်။
Coca-Cola က Co (KO), ပက်စီ, Northfield, အီလီနွိုက်-based Kraft နှင့် Kellogg Co. , စစ်တိုက်ခြင်းငှါအဘိဓါန် Creek, Michiganသူတို့၏သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်အတူအင်တာဗျူးများပေးရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
အဘယ်သူမျှမအဝလွန်ခြင်းတစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းကြီးထွားလာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာကြောင်းကိုအငြင်းပွားမှု။ အမေရိကန်မှာတော့လူကြီးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်သားသမီးများ၏ 17 ရာခိုင်နှုန်းတတိယအဝလွန်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့အားနံပါတ်များကိုတိုးမြှင့်လျက်ရှိသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ကနေ လက်တင်အမေရိကရန် ဥရောပ ပစိဖိတ်ကျွန်းလူအမျိုးမျိုး, အဝလွန်ခြင်းနှုန်းထားများလည်းတက်ပြီးနေကြသည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းမှကုန်ကျစရိတ်ကြီးမားသည်။ ထုတ်ဝေ 2009 လူများတစ်ဦးက 900,000 လေ့လာမှု, the Lancet, အလယ်အလတ်အဝလွန်မှုကိုလျော့နည်းစေကြောင်းတွေ့ရှိရ သက်တမ်း နှစ်ခုမှလေးနှစ်ပေါင်းအသုံးပြုပုံပြင်းထန်အဝလွန်တာ 10 အဖြစ်နှစ်ပေါင်းအားဖြင့်သက်တမ်း shortens နေစဉ်။ အဝလွန်ခြင်း၏အန္တရာယ်မြှင့်တင်ရန်ပြသထားသည် နှလုံးရောဂါ, ဆီးချို, အချို့သောကင်ဆာ, osteoarthritis, အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်ခြင်းနှင့်လေဖြတ်ခြင်း, အညီ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အစင်တာများ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နာမကျန်းကုသ၏ကုန်ကျစရိတ်များကျန်းမာရေးဆိုင်ရာရေးရာအတွက် 147 လေ့လာမှုအရသိရသည် 2008 အတွက် $ 2009 ဘီလီယံခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။
သကြားနဲ့အဆီ, သင်တန်း, အမြဲတမ်းလူ့အစားအစာအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရပြီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလောင်းတွေကသူတို့ကိုတပ်မက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသည်။ အဘယျသို့ပြောင်းလဲသွားပြီရှေးဖိုင်ဘာ၏အဆင့်ဆင့်သို့မဟုတ်အာဟာရဓာတ်မပါဘဲကြား၏စုစည်းအဆင့်ဆင့်, ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အဆီနဲ့သန့်စင်ပြီးမုန့်ညက်နှင့်အတူစားနပ်ရိက္ခာဖန်တီးခေတ်သစ်အပြောင်းအလဲနဲ့ဖြစ်ပါသည်, အဝလွန်ခြင်းကျွမ်းကျင်သူများကပြောကြားခဲ့သည်။ သူတို့အားလုပ်ငန်းများ၌အစားအစာအမြောက်အမြားစားသုံးမှုဦးနှောက်ကြိုးသည်လမ်းကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
သူများသည်အပြောင်းအလဲများကိုတွေအများကြီးအချို့သောကျွမ်းကျင်သူများကမှစွဲတူသောကြည့်ရှုပါ။ စွဲ "တပ်ပြီးအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်စွဲလမ်းနဲ့တူအောင်အပြုအမူထုတ်ယူနိုင်သောခေတ်မီအစားအစာ၏ရှုထောင့်ရှိပါတယ်," ဒါဝိဒျက Ludwig မှာနယူး Balance ဖောင်ဒေးရှင်းမှအဝလွန်ခြင်းကာကွယ်တားဆီးရေးစင်တာတစ်ခုဟားဗတ်သုတေသီနှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ် သားသမီးရဲ့ ဆေးရုံ ဘော်စတွန်။ မြင့်မားလုပ်ငန်းများ၌အစားအစာမတရားသောတိုးမြှင့်, သွေးတွင်းသကြားဓာတ်အတွက်လျင်မြန်စွာ spikes နှင့်ကျဆင်းမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်, မိမိသုတေသနပြုတွေ့ရှိရသိရသည်။
ပညာရေး, အစားအစာနှင့်အဝလွန်ခြင်းဆက်ဆံဖို့မူးယစ်ဆေးဝါးများအကြီးအကျယ်ထိရောက်မှုသက်သေပြခဲ့ကြပြီးအဝလွန်ခြင်း၏သစ်ကိုသိပ္ပံရှင်းပြစေခြင်းငှါ, ကိုထောက်ခံသူများကပြောကြသည်။ အရသာရှိတဲ့, calorie- ဝန်ကိုထမ်းရွက်အစားအစာများနှင့်အတူ constant ဆွအပျြောအပါးတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ပြည်နယ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရှိတဲ့ Junk အစားအစာ သာ. ကြီးပမာဏကိုစားသုံးရန်လူကိုဦးဆောင်, ဦးနှောက်ရဲ့ circuitry desensitize လိမ့်မည်။ တဦးတည်း 2010 လေ့လာမှု, ဂျူပီတာအတွက် Scripps Research Institute မှမှာသိပ္ပံပညာရှင်များအတွက် Florida, အောင်ကျွေးကြွက်တစ်ဦးဖက်တီး၏ခင်းကျင်းခြင်းနှင့်အပါအဝင် sugary ထုတ်ကုန် Hormel အစားအစာများကော်ပိုရေးရှင်း (HRL) ဘေကွန်, Sara Lee ကကော်ပိုရေးရှင်း (SLE) ပေါင်မုန့်ပြား, အဆိုပါ Cheesecake စက်ရုံ Inc ကို (ကိတ်မုန့်) cheesecake နှင့် Pillsbury Co. , Creamy အဓိပတိကိတ်မုန့် Frost ။ အဆိုပါလေ့လာမှုကြွက်ထဲထညျ့လျှပ်မှတဆင့်ဆုလာဘ်များနှင့်ပျော်မွေ့မှတ်ပုံတင်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်၏ဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတာ။
တစ်နာရီတစ်နေ့အဘို့ဤအအစားအစာမှဝင်ရောက်ခွင့်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါကြွက်များကိုပိုပြီးအာဟာရအစားအသောက်တနေ့လုံးမရရှိနိုင်ခဲ့လျှင်ပင်မူးရူးစား, စတင်ခဲ့သည်။ တစ်နေ့လျှင် 18 နာရီ 23 များအတွက်သကြားလုံးနှင့်အဖက်တီးအစားအစာများကိုဝင်ရောက်ခွင့်ခဲ့ကြွက်၏အခြားအုပ်စုများအဝလွန်ဖြစ်လာခဲ့သည်, ရှင်ပေါလု Kennyအဆိုပါလေ့လာမှုကိုဦးတည်သည့် Scripps သိပ္ပံပညာရှင်ဂျာနယ်တွင်ရေးသားခဲ့သည် သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ ရလဒ်ကိုကင်းများမြင့်တက်စားသုံးမှုနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်ကြောင်းတူညီသောဦးနှောက်ပုံစံထုတ်လုပ်သူရေးသားခဲ့သည်။
အစားအသောက်တူညီအမှုကိုပြုကြည့်ဖို့စိတ်ကိုထူးခြားဆန်းကြယ်ခဲ့ပါတယ်, "Kenny နောက်ပိုင်းမှာအင်တာဗျူးတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ သုတေသီများလူတွေအစားအစာအလွန်အကျွံပမာဏစားတဲ့အခါမှာဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စင်တာများမှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါရှာတွေ့နေကြပါတယ်။
တဦးတည်း 2010 Austin တွင်တက္ကဆက်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများအားဖြင့်ကောက်ယူလေ့လာမှုနှင့်မှာတော့ အော်ရီဂွန်သုတေသနအင်စတီကျုသူတို့ Haagen-Dazs ရေခဲမုန့်နှင့်အတူဖန်ဆင်းတဲ့ milkshake ၏ sips တယ်အဖြစ်, လူ့အပြုအမူလေ့လာနေတဲ့အကျိုးအမြတ်မယူအုပ်စု 26 အဝလွန်အမျိုးသမီးငယ်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် Scan ဖတ်ပေးတော်မူခဲ့ကြခြင်းနှင့် Hershey Co (HSY)'' s ကိုချောကလက်ရည်။
အလားတူအမြိုးသမီးမြားခြောက်လအကြာမှာထပ် MRI Scan ဖတ်ရတယ်။ သူတို့ milkshakes ဒုတိယအကြိမ် sipped လာသောအခါအလေးချိန်ရရှိခဲ့ဖူးသူများသည်အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်အတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထုတ်ဝေသည့်လေ့လာမှုရလဒ်များအရသိရသည်သည်, striatum အတွက်ဆုလာဘ်က register လုပ်သွားသောဦးနှောက်၏တစ်ဒေသလျှော့လှုပ်ရှားမှုပြသခဲ့သည်။
"ကျော်တစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတုံးဆုလာဘ်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, ဤသငျသညျနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်အတူတွေ့မြင်အတိအကျကဘာလဲ," အဲရစ် Stice သည်အော်ရီဂွန်သုတေသနအင်စတီကျုမှာသုတေသီကဆိုပါတယ်။
အစားအသောက်စွဲလမ်းလေ့လာနေသိပ္ပံပညာရှင်များပင်သူတို့၏ရွယ်တူချင်းအနေဖြင့်, သံသယကိုကျော်လွှားခဲ့ကြပါပြီ။ မှာထို့နောက်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသုတေသီကွယ်လွန်သူ 1990s, NIDA ရဲ့ Volkow အတွက် Brookhaven အမျိုးသား ဓါတျခှဲခနျး on Long Island တွင်တစ်ဦးလျှောက်ထား အမျိုးသား Institutes ၏ ကျန်းမာရေး သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ်စင်တာများထိခိုက်ခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိကြည့်ဖို့အဝလွန်လူတွေ scan မှပေးသနားတော်မူ။ သူမ၏ထောက်ပံ့ငွေအဆိုပြုချက်ကိုပယ်ချခံခဲ့ရသည်။
"ငါကငွေကြေးထောက်ပံ့မရနိုင်ခြင်း" ဟုသူမကအင်တာဗျူးတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ "ဒီတုံ့ပြန်မှု, အစားအစာဦးနှောက်ထဲမှာစွဲလမ်းကဲ့သို့သောအပြုအမူထုတ်လုပ်မသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ " Volkow, နိုင်စွမ်းတဲ့ဦးနှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ device ကိုသုံးပြီးလေ့လာအခြားအစိုးရအေဂျင်စီများထံမှရန်ပုံငွေအတူတကွ cobbled Brookhaven သုတေသီ Gene-ဂျက်ဝမ်, အတူလုပ်ကိုင် ရေဒီယိုသတ္တိကြွ tracers အသုံးပြု. ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းဓာတုလှုပ်ရှားမှုကိုတိုင်းတာ။
သုတေသီများ 10 အဝလွန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ဦးနှောက်အတွင်း dopamine အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့် map နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ Dopamine ဆုလာဘ်အချက်ပြလိုက်ခြင်းကြောင့်ဦးနှောက်အတွက်ထုတ်လုပ်မယ့်ဓာတုဖြစ်ပါတယ်။ dopamine ၏သဘာဝ Boosters စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတို့ပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများလည်းအမြောက်အမြားအတွက်ဓာတုလှုံ့ဆော်ခြင်း။
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုခုနှစ်, dopamine signal ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းဦးနှောက် receptors မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုတဖြည်းဖြည်းတူအဆင့်မြင့်၏ search မှာသူတို့ရဲ့သောက်သုံးသောတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်ပေါ်စေတိုးချဲ့မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုနှင့်အတူတုံ့ပွနျဖြစ်လာပေမည်။ အဆိုပါ Brookhaven လေ့လာမှုအဝလွန်ကလူလည်းပိန်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ dopamine receptors ၏အဆင့်ဆင့်လျှော့ချခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထိုနှစ်တွင်ပင်, စိတ်ပညာရှင်မှာ Princeton တက္ကသိုလ် ဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်အများဆုံးအချိုရည်တွင်ပါရှိသောသကြား၏တူညီသောရာခိုင်နှုန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး, သကြား, ရေတစ် 10 ရာခိုင်နှုန်းက solution ကိုစွဲဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိမရှိလေ့လာခဲ့တယ်။
တစ်ခုကရံဖန်ရံခါသောက်အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအဘို့အဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေစေ၏။ သို့သော်လည်းသုတေသီများကြွက်နေ့တိုင်းသကြား-ရေသောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်တဲ့အခါမှာသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုများတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ပုံမှန်အစားအစာများ၏လျော့နည်းစားသုံးခြင်းစဉ်အချိန်ကျော်သူတို့ "ကိုပိုမိုနှင့် ပို. ပို. " သောက်, Princeton မှာဘွဲ့ရကျောင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ်အလုပ်စတင်ခဲ့ပြီးယခုအခါဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်မှအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်သူသည်နီကိုးလ် Avena ကပြောသည်။
သကြား၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူပိတ်ဆို့သောအခါအဆိုပါတိရစ္ဆာန်များကိုလည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှု, လှုပ်ခြင်းနှင့်တုန်တုန်ယင်ယင်အပါအဝင်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေပြသသည်။ အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်များ, ထိုမှတပါး, စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်တိရိစ္ဆာန်များတွင်တွေ့မြင်သူတို့အားအလားတူဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine ၏အဆင့်ဆင့်အတွက်အပြောင်းအလဲဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ခဲ့ကြတယ်
"ကျနော်တို့ကတသမတ်တည်းကျနော်တို့သကြားပေါ် binging အဆိုပါကြွက်များအတွက်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်ပြောင်းလဲမှုများတိရစ္ဆာန်မူးယစ်ဆေးစွဲခဲ့ကြသည်လျှင်ငါတို့မြင်မယ်လို့အဘယ်အရာနှင့်တူကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်" နှစ်ပေါင်းနှောင်းပိုင်း Princeton စိတ်ပညာရှင်တွေနဲ့နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သူကို Avena, ကပြောသည် Bartley Hoebelယခုနှစ်အတွင်းသေဆုံးတဲ့သူ။
တိရစ္ဆာန်တစ်ဦးတည်းသကြားရေပေါ်မှာအဝလွန်ဖြစ်လာမပြုခဲ့သော်လည်း Avena နှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကသူတို့ကိုက high-fructose ပြောင်းဖူးရည်နှင့်အတူဒူရေကိုပူဇော်သောအခါ, သူတို့ကအဝလွန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၂၀၀၇ ပြင်သစ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကသုတေသီများသည်ကြွက်များသည် saccharine (သို့) သကြားနှင့်သကြားပါသောရေကိုကိုကာကိုလာများထက်ပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်) ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။
ယေးလ်ရဲ့ Brownell 2007 အတွက်အစားအသောက်စွဲလမ်းပေါ်ပထမဦးဆုံးညီလာခံ၏တဦးတည်းစုစည်းပြီးကူညီပေးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ. တစ်ဦးနောက်လိုက်, အက်ရှလေ Gearhardt, သုတေသီများစွဲလမ်းအပြုအမူနှင့်ဆင်တူကြောင်းစားသောက်မှုအလေ့အထများနှင့်အတူလူကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကူညီပေးမည့် 25-မေးခွန်းတစ်ခုကိုစစ်တမ်းကြံစည်။
သူမနှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်စစ်တမ်းအပေါ်မြင့်မားတဲ့သွင်းယူအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုဆနျးစစျဖို့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ milkshakes ၏ရုပ်ပုံများအထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု inApril ၏မော်ကွန်းထုတ်ဝေရလဒ်များကိုမှညီ, သောက်ထားချက်အရအရက်သမားအတွက် hyperactive ဖြစ်လာကြောင်းတူညီသောဦးနှောက်ဒေသများအထိ lit ။
အစားအသောက်စွဲလမ်းသုတေသနထိရောက်သောအဝလွန်ခြင်းဆေးဝါးများရှာဖွေရေး reinvigorate စေခြင်းငှါ, ကပြောသည် မာကုရွှေသူ Gainesville အတွက်ဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်မှာ Psychiatry ဌာနဥက္ကဋ္ဌ။ ရွှေသူအလုပ်လုပ်သောကုသမှုအလုံးစုံစာစားချင်စိတ်ကိုဖိနှိပ်ခြင်းမရှိဘဲအစားအသောက်ဦးစားပေးပြောင်းလဲပစ်ရန်ရှာခြင်းငှါကဆိုသည်။
"ကျနော်တို့က withpathological အစားအစာဦးစားပေးဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကြောင်းကုသမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်" ဟုသူကပြောသည်။ "သင်ဟာရေခဲမုန့်မှ areaddicted ဆိုပါစို့, သင်ရေခဲမုန့်အတွက်သင့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုပိတ်ဆို့တဲ့ကုသမှုနှင့်အတူတက်လာစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အသား၌သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားမထိခိုက်ပါဘူး။ "
ဆက်စပ်အလုပ်အတွက်, Shire PLC (SHP)တစ် Dublin-based drugmaker, binge- စားပြဿနာများနှင့်အတူလူနာအတွက်၎င်း၏ Vyvanse hyperactivity မူးယစ်ဆေးဝါးစမ်းသပ်နေပါတယ်။
လူတိုင်းမယုံကြည်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွမ်ဆီးတက္ကသိုလ်စိတ်ပညာရှင် ဒါဝိဒ်သည် Benton မကြာသေးမီကသကြားတစ် 16-စာမျက်နှာဝေဖန်ပြောဆိုမှုများပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ စွဲလေ့လာမှုများ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကငွေကြေးထောက်ပံ့အဆိုပါစက္ကူ, ကမ္ဘာ့ဖလားသကြား သုတေသနအဖွဲ့ , အစားအစာမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူမြင်ကြပြင်းထန်သော dopamine လွှတ်ပေးရန်၏တူညီသောမျိုးကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အချို့ဦးနှောက် receptors ပိတ်ဆို့ခြင်း binge- အတွက်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေထုတ်လုပ်ရန်ပါဘူးမမစောဒကတက်သည်, အတ္တလန်တာအခြေစိုက် Coca-Cola, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးပျော့-သောက်ထုတ်လုပ်သူပါဝင်သော စားကမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်မကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကိုမသိရသေးရဲ့အစားအသောက်ထို့အပြင်၏သိပ္ပံအဓိက Doritos, ကီနှင့်လူများတပ်မက်သည်အခြားခရောင်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ, ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, နေသောအစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာကုမ္ပဏီတို့တွင်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်စတင်နေပြီရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။
အရစ်ကျနယူးယောက်အခြေစိုက်ပက်စီရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်၏အကြောင်း 80 ရာခိုင်နှုန်း, ဥပမာ, ငန်မုန်နှင့်ဆိုဒါတွေတွန်းအားပေးဆီသို့ညွှန်ကြားထားသည်။ ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ကျန်းမာသန်ရာပူဇော်သက္ကာကိုထောက်ပြရန်အမြန်ဖြစ်ကြပေမယ့်, သူတို့ရဲ့ထိပ်တန်းအမှုဆောင်အရာရှိအဆက်မပြတ်ရေစာအစားအစာများနှင့်အဆိုဒါတွေသူတို့ရောင်းအားတည်ငြိမ်တိုးတက်မှုနှုန်းဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစိတ်ချဖို့အပေါ်သို့ဟုခေါ်ကြသည်။
"ကျနော်တို့ကအမြတ်အစွန်းတိုးတက်မှုနှင့်ဝင်ငွေတိုးတက်မှုနှုန်းမြင်ချင်," တိ Hoyle, Radnor အတွက် Haverford Trust မှ Co. , မှာသုတေသန၏ဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်, Pennsylvania , ပက်စီ, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရေစာ-အစားအစာထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ။ "ဒီကျန်းမာရေးအစားအစာခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အဘို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုမှဆင်းရရှိသွားတဲ့သောအခါ, ကြီးထွား drivers တွေကိုသက်သာအစားအစာများ, အ Tostitos နှင့် Pepsi-Cola ပါ။ "
Little ကအံ့သြစရာကတော့ကြောင့် အစာစက်မှုလုပ်ငန်း အဝလွန်ခြင်းအပေါ်တစ်ဦးလက်ကိုင်ရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဆန္ဒအလျောက်အစီအမံမှတစ်ဆင့်နှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းရွေးချယ်မှုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်ကြောင်းကိုစိတ်ကူးပေါ်ခဲယဉ်းတွန်းအားပေးနေသည်။ အလားတူနည်းဗျူဟာကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များနှင့် "အနိမ့်ကတ္တရာစေးနှင့်နီကိုတင်း" စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အတူစီးကရက်စွဲလမ်းသဘောသဘာဝကနေအာရုံကိုလမျးလှဲသောဆေးရွက်ကြီးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်, ဆယ်စုနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့ခဏအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
စားနပ်ရိက္ခာလုပ်ငန်းမှလော်ဘီသမားများသည်ထိုအငြင်းပွားမှုကိုမဝယ်ကြပါ။ ဆေးဝါးဗေဒပညာရှင်နှင့်အမေရိကန်အဖျော်ယမကာအသင်းမှအတိုင်ပင်ခံရစ်ချတ်အဒမ်ဆန်က“ သကြားလုံးဘား၊ ရေခဲမုန့်သို့မဟုတ်ပေါ့ပ်ဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံရဖို့ဘဏ်ကိုလုယက်တာတစ်ယောက်မှမကြားဖူးဘူး။ ”
ဒီပုံပြင်အပေါ်သတင်းထောက်များအားကိုဆက်သွယ်ရန်: မှာ New York မှာရောဘတ် Langreth [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]; အတ္တလန်တာမှာ Duane ဃစတန်းဖို့ဒ် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
Reg Gale မှာ: ဤပုံပြင်များအတွက်တာဝန်ရှိအယ်ဒီတာဆက်သွယ် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]